Charlie Nicholas oo ku wargeliyey kooxdiisii hore ee Arsenal halka arrin oo ay isaga faxisi karto Pierre-Emerick Aubameyang – Gool FM
(London) 28 Mar 2020. Halyeygii hore ee kooxda Arsenal, Charlie Nicholas ayaa ku wargeliyey kooxdiisii hore ee Gunners kaliya hal arrin oo ay isaga fasaxi karto Weeraryahankeeda Pierre-Emerick Aubameyang.
Gunners ayaa ka wal-walsan inay lumiyaan Weeraryahankooda Pierre-Emerick Aubameyang, kaasoo kaliya 12 bilood uu kaga harsan yahay heshiiskiisa oo ku joogo kooxda reer London, waxaana xusid mudan inuu xor noqon doono oo uu sanad kaddib si bilaash ah kaga tagi doono garoonka Emirates, haddii aan qandaraas cusub laga saxiixin.
Waxaa loo badinayaa Pierre-Emerick Aubameyang inuu u dhaqaaqi doono mid ka mid ah kooxaha u gacan haatinaya oo ay ku jiraan Real Madrid, Barcelona iyo Manchester United, kaddib markii uu iska diiday inuu heshiis cusub u saxiixo Arsenal.
Yeelkeede, halyeygii hore ee Arsenal Charlie Nicholas ayaa u sheegay kooxdiisii hore qaab ay ku sii dayn karto Pierre-Emerick Aubameyang, iyagoo fursaddooda ka faa’iidaysanaya sida uu yiri.
Charlie Nicholas oo hadda ka shaqeeya hilinka Sky Sports ayaa u soo jeediyey kooxdiisii hore ee Arsenal inay Pierre-Emerick Aubameyang u ogolaato inuu tago haddii ay ka helayso lacag ay u adeegsato inay dib ugu dhisto koox tartami karta, taasoo suuqa ka soo goyn karta xiddig isaga lagu bedelo.
Waxa uu Nicholas sheegay in Jamaahiirtu ay aqbali doonaan in Arsenal ay iibiso xiddigeeda, balse kaliya ay taasi dhici doonto haddii lacagtaas loo isticmaali doono mid macallin Mikel Arteta ka caawisa inuu dib ugu dhiso kooxda.
“Wiilkani waa mishiinka goolasha, rikoorkiisa ayaana taas sheegaya, caddayntu waxay muujinaysaa in khasaaraha ugu dambeeya ee aad galaysaan uu yahay inaad lumisaan ciyaartoy sida Aubameyang oo ah dhaliye cajiib ah.” ayuu Nicholas u sheegay muuq baahiyaha Sky Sports.
“Sida kaliya ee lagu aqbali karayo iibkiisa, waa haddii lacagtiisa loo isticmaalayo dib u dhiska kooxda, Arsenal waxay isku dayaysay inay dib isku dhisto muddo shan sanadood ah, laga yaabaa inay ka sii badan tahay oo aanay marna u dhowaanin inay gaaraan halkaas, waxayna ka baxeen Champions League oo ay ku waayeen dakhli badan.” ayuu hadalkiisa ku daray khabiirkaan.
Xiddiga xulka qaranka Gabon oo Arsenal ay sanadkii 2018 ay 56 milyan oo gini kaga soo iibsatay Naadiga reer Jarmal ee Borussia Dortmund, waxa uu u saftay Gunners 97-kulan tartammada oo dhan, isagoo u dhaliyey 61 gool, halka uu caawiye ka ahaa 13 gool oo kale, waxaana Gunnes ay isku dayaysaa haatan inay laacibkeedan ku qanciso heshiis kordhin.